Nei vazhinji vePCB vagadziri vachisimudza mutengo muna 2021?
ne admin pane 21-02-28
Nei vazhinji vePCB vagadziri vachisimudza mutengo muna 2021? - - Izvo zvikonzero zvePCBX mutengo unokwidza. Mhedziso: Muna 2021, hupfumi hwenyika hwakatambura zvisati zvamboitika nekuda ...
Pcb kugadzirwa kwepasirese kugona kunoenda kumabvazuva
ne admin pane 20-10-20
Apple yapfuura tekinoroji yekuvandudza yaunza mikana mikuru yekugadzirisa pcb indasitiri cheni. Iyo iphone 8 ingangodaro inosvitsa matekinoroji matsva semabhodhi anotakura, nekudaro ichivhura denderedzwa nyowani yekumabhodhi ekuchinja. Chigadzirwa tambo kugadzirisazve ichapfuura kumashure ...
Kaisheng akabata 2016 Mutengesi Musangano-kubudirira kwakazara
"Win-win mushandirapamwe inobatsira nyika" ndiro dombo repakona raKaisheng rekutengesa cheni manejimendi. "Kupfuura kwakasimba kwemuvengi kwakafanana nemadziro edare, asi nematanho akasimba, tiri kukunda musangano wayo". Pane chiitiko chekusiya chekare uye kugamuchira chitsva muna 2016, isu ...
Kugadzirwa kweIC mumwedzi mishanu yekutanga ya2017 yakawedzera ne25.1% gore-ne-gore
Zvinoenderana nekushanda kweindasitiri yemagetsi yekugadzira ruzivo kubva munaNdira kusvika Chivabvu wa2017 yakaburitswa nebazi rezvemaindasitiri uye ruzivo rwetekinoroji, kugadzirwa kwemagetsi emagetsi indasitiri yakaramba ichingochengetedza kukura kwakasimba, uko kwakabatana maseketi inc ...
Makorokoto kuKAISHENG nekupihwa "AAA Chikwereti Bhizinesi"
Musi waJune 21, 2019, iyo kiredhiti chiyero cheSHENZHEN KAISHENG PCB CO., LIMITED yakaverengerwa AAA neChina Enterprise Yekuongorora Association.
Kuongororwa kwenzvimbo inokwikwidza yeChinese yakadhindwa wedunhu bhodhi indasitiri muna 2016
Tatarisana nehasha dzemakwikwi epasi rese kumanikidza uye nekukurumidza shanduko yesainzi, China yakadhindwa wedunhu bhodhi indasitiri iri kukurumidza kumhanya kwayo kuyedza kumatunhu epamusoro uye kubudirira. Akadhindwa wedunhu bhodhi vagadziri anonyanya kugoverwa mumatunhu matanhatu anosanganisira China, Taiwan, Japa ...
5G inopokana nePCB tekinoroji
Kubva 2010, iyo yekukura mwero wepasirese pcb yekugadzira kukosha kwave kazhinji kuderera. Kune rimwe divi, inokurumidza-iterative nyowani magineti matekinoroji inoenderera nekukanganisa yakaderera-magumo ekugadzira kugona. Imwe chete uye yakapetwa mapaneru ayo akambotara pekutanga muhuwandu hwekuburitsa zvishoma nezvishoma achitsiviwa neepamusoro-magumo pro ...